Dvoranina - Kroatisch - Burmesisch Übersetzung und Beispiele
Sie suchten nach: dvoranina (Kroatisch - Burmesisch)
ဖါရောဘုရင်သည် ထိုအမတ်နှစ်ယောက်တည်း ဟူသော ဖလားတော်ဝန်နှင့်စားတော်ဝန်တို့ကို အမျက် ထွက်၍၊
Tada kralj izraelski dozva jednoga dvoranina i reèe mu: "Bre dovedi Jimlina sina Miheja!"
ထိုအခါ ဣသရေလရှင်ဘုရင်သည် အရာရှိ တယောက်ကိုခေါ်၍၊ ဣမလသားမိက္ခာကို အလျင် အမြန်ခေါ်ခဲ့ဟု မိန့်တော်မူ၏။
zavolje on Josipa, uze ga za dvoranina i postavi ga za upravitelja svoga doma i povjeri mu sav svoj imetak.
ထိုကြောင့် ယောသပ်သည် သခင်ရှေ့၌ မျက်နှာရ၍ခစားလျက် နေရ၏။ သခင်သည်လည်း မိမိ အိမ်တွင် အိမ်အုပ်အရာနှင့် ခန့်ထား၍ ဥစ္စာရှိသမျှကို အပ်လေ၏။
Tada kralj izraelski dozva jednoga dvoranina i reèe mu: "Bre dovedi Jimlina sina Miheja."
ထိုအခါ ဣသရေလရှင်ဘုရင်သည် အရာရှိ တယောက်ကိုခေါ်၍၊ ဣမလသားမိက္ခာကို အလျင်အမြန် ခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏။
On usta i poðe. Odjednom eto nekog Etiopljanina, dvoranina, visokog dostojanstvenika kandake, kraljice etiopske koji bijae nad svom njezinom riznicom.
Tu se naðe zapisano kako je Mordokaj prokazao Bigtanu i Terea, dva dvoranina kraljeva, èuvare praga, koji su se spremali da podignu ruke na kralja Ahasvera.
ရှင်ဘုရင် အာရွှေရုကို လုပ်ကြံမည်ဟု ရှာကြံ သော နန်းတော်မိန်းမစိုး၊ တံခါးစောင့်နှစ်ယောက်၊ ဗိဂသန်နှင့် တေရက်အကြံကို မော်ဒကဲ ဘော်ပြကြောင်း ကိုတွေ့လျှင်၊
Razagnao je konje koje su judejski kraljevi prinijeli suncu na ulazu u Dom Jahvin, kraj sobe dvoranina Netan Meleka, koja se nalazila u blizini, i spalio je u ognju sunèana kola.
ယုဒရှင်ဘုရင်တို့သည် နေကိုပူဇော်၍၊ ဗိမာန် တော်ဝင်းပြင် အရာရှိနာသမ္မေလက်အိမ်နား၊ ဝင်းတော် တံခါးဝ၌ထားသော မြင်းတို့ကိုလည်း ပယ်ရှား၍ နေရထားတို့ကိုလည်း မီးရှို့တော်မူ၏။
Jehu okrenu lice prema prozoru i reèe: "Tko je sa mnom, tko?" I dva-tri dvoranina pogledae prema njemu.
ယေဟုသည် မျှော်ကြည့်၍၊ ငါ့ဘက်မှာ အဘယ် သူနေသနည်း။ အဘယ်သူဟုမေးလေသော်၊ မိန်းမစိုး နှစ်ယောက်သုံးယောက်တို့သည် ပြတင်းပေါက်ထဲက ကြည့်ရှုကြ၏။
ထိုကာလတွင်၊ မော်ဒကဲသည် နန်းတော်၌ တံခါးမှူးဖြစ်စဉ်၊ ဗိဂသန်နှင့် တေရက်တည်းဟူသော နန်းတော်မိန်းမစိုး၊ တံခါးစောင့် နှစ်ယောက်တို့သည် ဒေါသစိတ်ရှိ၍ ရှင်ဘုရင် အာရွှေရုကို လုပ်ကြံမည်ဟု အားထုတ်ကြ၏။
Iz grada je odveo jednog dvoranina, vojnièkog zapovjednika, pet ljudi iz kraljeve pratnje koji se zatekoe u gradu, pisara zapovjednika vojske koji je novaèio puk i ezdeset puèana koji se takoðer zatekoe u gradu.
နောက်တဖန် အာရှုရိရှင်ဘုရင်သည် တာတန်၊ ရာဗသာရိတ်၊ ရာဗရှာခတို့ကို များစွာသော ဗိုလ်ခြေနှင့်တကွ၊ လာခိရှမြို့မှ ယေရုရှလင်မြို့၊ ဟေဇကိမင်းကြီးထံသို့စေလွှတ်သဖြင့်၊ သူတို့သည်ရောက်သောအခါ၊ ခဝါသည်၏ လယ်နားမှာရှောက်သောလမ်း၊ အထက်ရေကန်ပြွန်ဝ၌ရပ်နေကြ၏။
the love of family is life?s greatest blessing (Englisch>Italienisch)bp hd x full open (Hindi>Englisch)meine liebe fraulein (Deutsch>Russisch)b'laan words translating (Englisch>Tagalog)mustelmiako (Finnisch>Hebräisch)mas okay na yung ganto (Tagalog>Englisch)toldindtægter (Dänisch>Englisch)estas bien chulo (Spanisch>Englisch)saya rasa dia tu cemburu dengan saya (Malaysisch>Englisch)source out (Englisch>Tagalog)tungstenio (Portugiesisch>Latein)video streaming (Englisch>Tagalog)sumaj punchay (Ketschua>Spanisch)kulay lila sa english (Tagalog>Englisch)restarts (Holländisch>Englisch)condemning authority (Englisch>Italienisch)usne koi reply nahi kiya (Hindi>Englisch)sei la mia stella (Italienisch>Latein)ap bohat achi ho (Hindi>Englisch)i am trying not to sleep myself (Englisch>Hindi)abj abdul kalam tamil kavithaigal (Tamilisch>Englisch)sterling silver (Englisch>Malaysisch)velog फल खरीद चुके हो (Hindi>Englisch)tabstrip controller (Englisch>Deutsch)střelivo (Tschechisch>Spanisch)